Iinkonzo kunye neNgxaki yeeNqunquthela zeeKomfa
Imiba Iimkhankaso kunye nokhetho
I-Pros ne-Cons ye-Imposing Terms Limits ye-Congress
Ingcamango yokumisela imida yexesha leNgqungquthela, okanye umda wokumisela ukuba amalungu endlu kunye neSenate angasebenza njani kwixesha elide, lixutyushwa luluntu ngeenkulungwane. Kukho iingxaki kunye neengxaki kunye nemibono enamandla kumacala omabini omcimbi, mhlawumbi umangaliso, unikezwe ngumbono ongaphantsi kwe-votorate of their representatives in history.
Nazi ezinye iimpendulo kunye nezimpendulo malunga nemida yexesha kunye neengxoxo eziqhubekayo ezungeze le ngcamango, kunye nokujonga kwimiqathango kunye neengxaki zemiqathango yenkomfa yeCongress.
Ngaba ikhona Imida yeNkcazo ngoku?
Amalungu eNdlu yabameli abakhethiweyo iminyaka emibini ngexesha kwaye angasebenzisa inani elingenamkhawulo. Amalungu e- Senate anyuliweyo iminyaka emithandathu kwaye angasebenza nenani elingenamkhawulo.
Yiyiphi iLona elide kunabo bonke oye lakhonza?
Omntu ode kunakekileyo owake wakhonza kwi-Senate yayineminyaka engama-51, iinyanga ezintlanu kunye neentsuku ezingama-26, irekhodi eligcinwe nguRobert C. Byrd. UMdemokhrasi waseWestinia wase-West Virginia wayesebenza ngoJan. 3, 1959, ngoJuni 28, 2010.
Umntu ode kunabo bonke owake wakhonza kwiNdlu yayingaphezu kweminyaka engama-53, irekhodi eligcinwe yi-US Rep. UJohn Dingell Jr. UMdokrasi waseMichigan uye waba sesikhundleni ukususela ngo-1955.
Ngaba ikhona Imida yoMongameli?
AbaMongameli banqunywe kuphela kwimigangatho emibini kuphela emine kwiNdlu eNtshonalanga phantsi koLungiso olungama-22 kuMgaqo-siseko, ofundwa ngenxalenye: "Akukho mntu uya kunyulwa kwi-ofisi kaMongameli ngaphezu kokuphindwe kabini."
Abanye abathathi-bendlobongela bathi uMongameli uBarack Obama wayecwangcise ngasese ukuphelisa i- 22nd Amendment kwaye asebenze kwikota yesithathu kwi-White House .
Ngaba Kukho Ukuzama Ukunyanzelisa Ixesha Lemida kwiCongress?
Kukho iinzame ezininzi zamagqwetha abathile ukugqithisa imida emiselweyo, kodwa zonke ezo ziphakamiso aziphumelelanga.
Mhlawumbi inzame edumileyo ekudlulayo kwexesha lafika ngexesha elibizwa ngokuba yiRepublican revolution xa i-GOP ithatha ulawulo lweCongress ngo-1994 lwangaphakathi lokhetho.
Imida yesikhashana yayisisitatimende seKontrakthi yeRiphablikhi kunye neMelika . Isivumelwano esibizwa ukuba sisuswe ngabapolitiki bezopolitiko ngokuvota kuqala kwixesha elide njengenxalenye yoMthetho weSigqeba soMthetho weSizwe. Umda wexesha awuzange uphumelele.
Kuthiwani ngomThetho weCrowressional Reform Act?
Umthetho weChressional Reform Act awukho. Ingqungquthela echithwe kwiimfesane ze-imeyile njengomthetho osemthethweni oya kunciphisa amalungu eKongano ukuya kwiminyaka eyi-12 yenkonzo-nokuba yiminyaka emibini yeminyaka ye-Senate okanye imiqathango emithandathu yeminyaka yeNdlu.
Ziziphi iimbambano ezithandekayo kwixesha elide?
Abaxhasi bemida yenkcitho bathi ukukhawulelana nenkonzo yabameli abavimbela ezobupolitika ukuba bangenise amandla amakhulu eWashington kwaye bahlukane kakhulu kwiindawo zabo.
Ukucinga kukuba abaninzi abameli bayijonga umsebenzi njengengqesho, kungekhona isabelo sesikhashana, ngoko ke bachithe ixesha elide lokunyanzelisa, ukunyusa imali yokhetho lwabo lokukhetha ukhetho kunye nokusebenza kwiofisi endaweni yokugxila kwimicimbi ebalulekileyo yosuku.
Abo banomdla umda wecala bathi baya kususa ukugxininisa kwezopolitiko kwaye bawubuyisele kumgaqo-nkqubo.
Ziziphi iimbambano ezichasene nexesha elide?
Ingxabano eqhelekileyo ngokumalunga nomda wexesha ihamba into efana nale: "Sinexesha elide. Icala eliphambili elibhekiselele kumda wemiqathango kukuba, ngokwenene, amagosa ethu atyunjiweyo kwiNdlu kunye neNkundla yeeNkundla kufuneka ibhekane neendawo zabo ezimbini kwiminyaka emibili okanye kwiminyaka emithandathu kwaye bafumane imvume.
Ukufakela imida emide, abachaseneyo, bayakususa amandla avela kubavoti ngokuya kumthetho ongenamdla. Ngokomzekelo, ummeli owaziwayo obonwe ngabamalungu akhe njengendlela esebenzayo kunye nefuthe ufuna ukumkhetha kwakhona kwiCongress - kodwa ingavunyelwa ukwenza njalo ngumthetho wemiqathango.
UBernie Sanders Bio
Iimvoti zeNyulo zoNyulo zinikezelwa njani
Indlela yokubika iingxaki zokuLungelo lokuVota
Indlela Yokuqala I-Super PAC
Vula iNkcazo yeSiseko
Abathathu abaPhezulu abameli bakaMongameli be-Conservative ngo-2020
I-Ted Cruz ixabisa malunga ne-3.6 yezigidi
Iintlanzi kunye nezilwanyana zezilwanyana ezinobungozi
Top 10 Christina Aguilera Iingoma
Nguwuphi umsebenzi we-Plant Stomata?
Ukwazisa umhlaba: Iintlobo zemithi
UMinuit Chrétien I-Khrisimesi yaseKrisimesi iColor Christmas Ngokuba Ubusuku Bungcwele
Ukuthelekisa uLwimi oluDumeleyo lweeLwimi
Eyona nto ibalulekileyo ye-Hit-Wonders yama-1990
Indlela Yokuthumela Ulwazi (Umgca, Umfanekiso, Ukurekhoda) Phakathi kwezicelo ezimbini
Ukuhlaziywa kweNveli eNdiya kwihlabathi kwiintsuku ezingama-80
Yiyiphi Inokwenzeka Ukuba Ufakwe Kwinqanaba Lincoln's Breath's Last Breath?
Ukuya okanye Ukuqwalasela yiSakhono sokuQala kokuQala
Umthetho weButtle Button
Indlela Yokudweba I-One Point Point Perspective
Izizathu ezintathu eziqhelekileyo zokuKhatywa kweSikolo soBucala
Isicwangciso soThengiso soMmeli ozimeleyo
Iimpawu zeMpawu zeMetri kunye neMigudu
Amatye kumaYuda angcwaba
UMTHETHO Ulinganisa Ukwamkelwa kwiiyunivesithi zikaRhulumente zaseVirginia
Umhlahlandlela Wokuhamba Ngeendlela Zomdaka We-Mustang
I-Cycling Ii-Glass ze-Glass nge-Ryders Eyewear
Iimali eziqhelekileyo kwisiJamani
SuperUgs ezinhlanu eziyingozi